Wikipedia:Maaha - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Wikipedia:Tafaasiil)
Boggaan Wikipedia:Xeerka Wiki Qaybta Af-Soomaaliga Waxaa soo gala dad farabadan oo wax ku qora waxaana jira halbeeg la adeegsado oo ah xoriyad ayaan dareemayaa wax alla wixii aan rabo baan qorayaa.
Marka maaha sidaas ee qor wax macquul ah oo dadka ay isku raaci karaan iskana hubi waxa aad qortay.
Wikipedia waa insaykalobeedhiya waxaa jira wax sugan iyo shuruudo kuwa la isku raacay wikipedia, maaha wikipedia wax yaabahaan soo socda:
1 Muuqaalka iyo habka
1.1 Wikipedia maaha insakalobeedhiya xaanshi ah
2 ku jira
2.1 Wikipedia maaha qaamuus
2.2 Wikipedia maaha meel afkaarta cusub lagu faafiyo
2.3 Wikipedia maaha meel xayeesiin
2.4 Wikipedia maaha meel sawirada lagu kaydsado
2.5 Wikipedia maaha meel lagu casuumo boggagga gaarka ah
2.6 Wikipedia maaha xarun aqoon guud
2.7 Wikipedia maaha baaraandeg
2.8 Wikipedia maaha mid ilaalisa caruurta
2.9 Wikipedia maaha meel fanka lagu tijaabiyo
3 Mujtamaca wikipedia
Muuqaalka iyo habka
Wikipedia maaha insakalobeedhiya xaanshi ah
Wikipedia maaha qaamuus
Wikipedia maaha meel afkaarta cusub lagu faafiyo
Wikipedia maaha meel xayeesiin
Wikipedia maaha meel sawirada lagu kaydsado
Wikipedia maaha meel lagu casuumo boggagga gaarka ah
Wikipedia maaha xarun aqoon guud
Wikipedia maaha su'aalo talantaali ah, ka dhiidhin, Daliil safar, Waarin, faallooyin wareed, Faraca, ama liis telefoon.
Wikipedia maaha baaraandeg
Wikipedia maaha Ka baaraan-degis, macanaha Maaha meel looga baaraandego dhacdooyin la filayo in ay dhacaan. qorista ka baaraandegis cilmi ah ama siyaasad ah ama soo saaris iyo afkaar ka hadlaysa mustaqbalka lama aqbali karo wikipedia. Wikipedia macluumaadka la hubo waxaana ka m id ah mid hadda jirta iyo mid horay loo arkay, man ahan ka baaraadegis. Qorista dhacdooyin ama waxyaaba soo bixi doona waa la ogolyahay; laakiin waa in ay waqti lahaadaan hadda la joogo.
Wikipedia maaha mid ilaalisa caruurta
Wikipediya waxaa ku jira maqaalo la diidanyahay ama ku dhibaya, ma jiro wax dabagal ah waxaa jirta xoriyada qorista, sidaas daraadeed wikipedia awood umalahan in ay wiilkaada ka ilaaliso maqaalada la rabin, waxaa jiri karta maqaalo ayna rabin dadka qaar laakiin aan ka hor imaanayn xeerka dhexdhexaadnimada Mana ka hor imaaneeyso qaynuunka gobolka Foloriida waxaa jira Server kaasoo ay keensatay Wikipedia.
Wikipedia maaha meel fanka lagu tijaabiyo
Wikipedia maaha Meel qof gaara uu leeyahay taasoo ugu tala galay in uu ku faafiyo fankiisa: Sheekooyin ama qisooyin gaagaaban ama dheedheee haba ahaadeen kuwa la yaqaan ama aan la aqoon. waxaan waxba laga faaiidayn waa la tirtirayaa: eeg Wikipedia:Tirtir.
Goob dagaal: waa in lagu dadaalaan dhaqan wanaagsan.
Bulsho fowdo: xoriraydda waxaa ku daba jira (tirtiris, ilaalin, ka joojin)
Demoqradiyad: Wikipedia maaha meel dimoqraadiyada lagu tijaabiyo qaacidada aasaasiga ah waa midaynta fakarka mana ahan codayn, codayntu way soo fajari kartaa. waxaa dhici karta wadahadal iyo midaynta ra'yiga taasoo ku saabsan mowduuc gaar ah kadibna la isku raaco.
Bureaucrats: waa khilaaf jira ee lagu xaliyo si la isku raaco.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Maaha&oldid=163318"
Last edited on 23 Oktoobar 2016, at 13:03
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 23 Oktoobar 2016, marka ee eheed 13:03.